Indoda yaseCapricorn - I-Capricorn
Ulwazi ngeCapricorn Man x
Xa indoda yaseCapricorn ithandana, into yokuqala eya kuyenza iqala ukwenza izinto ezingaqhelekanga. Akaqhelananga nemvakalelo, ngokubanzi, kwaye uya kujonga umbandela womnqweno wakhe njenge-extraterrestrial eyehla eMhlabeni kuphela ukumbhida. Oku kuya kudlula ngothando lokuqala, mhlawumbi kunye nesibini, kodwa kukho rhoqo ukuba kunokwenzeka ukuba uya kujonga iqabane lakhe elithandekayo njengomntu ovela kwelinye ihlabathi okanye ixesha. Kuya kufuneka afunde ngokuthe ngcembe ukwenza okuthile ukuze azuze intliziyo yomntu. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba i-stroke yakhe yokuqala yothando ibuyiswe, kukho ithuba lokuba uya kuhlala kubudlelwane obufanayo ixesha elide, mhlawumbi ixesha elide njengoko bobabini baya kuphila. Ngomnye wezona mpawu zizinzileyo, ezinenkani, ezinzulu ngokweemvakalelo kwizodiac. Akaze athabathe nantoni na, kwaye akavumi ukuba nenqala, nto leyo eyenza ukuba iimvakalelo zakhe zibe nzulu kwaye zibe yinyani xa zithe zavela.
Kukho i-paradox kumqondiso we Capricorn . Kwelinye icala, luphawu lokuphakanyiswa kukaMars kwaye oku kunika indoda yaseCapricorn ukuba ibe neentlobano zesini ngokwaneleyo kunye namandla okunyamezela kubudlelwane bezesondo obanelisayo ixesha elide kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, iCapricorn kunye nomlawuli wayo uSaturn banqanda zonke izenzo ezingenabo ubunzulu, kwaye akayi kuba ngumthandi omkhulu ngaphandle kokuba akhe ubuhlobo bokwenene beemvakalelo kuqala. Xa eyenzayo, ibali elihlukileyo, kodwa ufuna ixesha lokuqonda ukuba yintoni efunekayo kubomi bobulili obukhulu - imvakalelo.
Ukuba ukhangele indoda onokuthi ukhombe ngayo umnwe wakho uthi: Unzima, loo nto ingaba yindoda yaseCapricorn. Akulula ukuba naye, njengophawu loMhlaba, okanye njengomntu olawulwa yiLanga nguSaturn. Unokuba ngqongqo kakhulu kwaye izinto azilindeleyo zisenokungakwazi ukuhlangabezana nazo. Ukuba akafumani umlingo wokwenene wothando, uya kuba nobutyebi kodwa abe nenkani, ngaphandle kokuthomalalisa okwenziweyo okanye ukuguquguquka. Yiyo loo nto inzulu kwaye ikhuthaza ukuphumelela intliziyo yakhe kwaye umbone enyibilika, etshintsha kwaye evulela izinto angenakuze aziqwalasele ngaphambi kokuba adibane nawe. Xa ethanda umntu, kunqabile ukuba angamenzeli umntu omthandayo, kwaye kukhuselekile ukuthetha ukuba ulungele ukuhlala neqabane elifanelekileyo ngonaphakade, kwaye ungaze usithandabuze isigqibo sakhe, okanye iimvakalelo zakhe.
Ngaba unokumthemba wakhoIndoda yaseCapricorn
Ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa kuphela ukuba wenze isigqibo sokuthembeka, ukunyaniseka kunye nomfazi omnye. Kuyo nayiphi na enye imeko, yonke into inokulindelwa kwaye uya kwenza ngendlela acinga ukuba ifanelekile. Ngokuqhelekileyo, uyesaba ukuziva unetyala, kwaye ngokubhekiselele ekuqondeni kwakhe, akayi kulimaza, axoke okanye akhohlise nabani na ngamabomu. Sekunjalo, luphawu olulawulwa nguSaturn, iplanethi yokungazi kwethu, kwaye ngamanye amaxesha ulahlekelwa ukulawula ukhetho lwakhe, engazi nokuba uyazi. Esi sizathu sokuba athande ukulawula yonke into encinci, ecinga ukuba unokuphepha izenzo zakhe zokungakhathali.
Indoda yaseCapricorn iya kwenza yonke into ngokufanelekileyo. Uya kukusa kwiindawo ezifanelekileyo, akuhloniphe, akuse ekhaya, ahlawulele i-cab yakho kwaye abambe umnyango wakho. Umlawuli womqondiso wakhe uphakanyiselwe eLibra, kwaye uyazi ukuba eyona nto yakhe inkulu kukukwazi kwakhe ukuba nobuchule, ukuziphatha kakuhle kunye nokukhalipha. Uya kubonakala njengale ndoda yomelele, eqole ngendlela emangalisayo eyazi kakuhle into eyifunayo kwaye ayoyiki ukuyifumana. Uya kukuthanda ukuba kumhla kunye nomntu omthandayo, kodwa nokugcina umgama onengqondo kwaye uhlala eyimfihlo.
Akulula ukuqonda indoda yaseCapricorn. Ubonakala ebanda kwaye ekude, enengqondo kwaye egxeka, kodwa asifane siyeke ukuqonda ukuba ngenene woyika ukusilela, ungqongqo ngakuye kwaye uhlala ezama ukuhlala elawula. Akafuni ukwenza impazamo, kuba uyayiqonda imiphumo yaso nasiphi na isenzo ngaphezu kwakhe nabani na. Oku kumenza alumke, aqaphele ukuba angaceli umngeni kwi-karma kwaye agxininise kuye kunye neenjongo zakhe eziphathekayo ezimnika ingcamango yokuba unobomi obuphantsi kolawulo. Uzakha iindonga ukuze ahlale ekhuselwe, mhlawumbi uyonakaliswa, uthethiswa okanye ushiywe nguyise, okanye eminye imizekelo enempembelelo. Xa uthe wamazi kwaye ubona icala lakhe elithambileyo emva kwezi ndonga, awusoze ufune ukuba ngaphandle kwakhe kwakhona.
Indoda yaseCapricornUkuthandwa nokungathandwa
Unamandla, unokwethenjelwa, uqinisekile kwaye uqinisekile ngokukhetha kwakhe, ngelixa elifanayo lisebenza kwaye ligxininise kwiinjongo zakhe, kunye nesicwangciso esipheleleyo sekamva. Kwelinye icala, unokuba ngofuna izinto ngenkani, obandayo yaye ukude, angabi naluvelwano kwaye abe ngqongqo, alindele ukuba wonke umntu omngqongileyo azive enetyala okanye engafaneleki.
Indlela yokukhetha isipho sakhoIndoda yaseCapricorn
Ngalo lonke ixesha uzihlonele izihlandlo ezikhethekileyo kwaye usebenzise kangangoko unako. Unokumangaliswa ngokuvuleka kwakhe kuzo zonke iintlobo zezinto ezingaqhelekanga, kodwa ngaphambi kokuba uqhelane naye, kungcono ukunamathela kwizithethe, zembali, zemfundo, izipho eziluncedo ezinokuhlala ixesha elide kakhulu. Unokuqonda ubugcisa obuneenkcukacha ezininzi, iimpawu ezincinci kodwa ezixabisa kakhulu zothando, kwaye uthanda izinto ezicocekileyo kwaye zifikelele kwinqanaba. Khetha isipho esinengqiqo, mhlawumbi yeyona ndlela ilungileyo yokuyibeka.
Iiary Ngena Aquarius Khetha Uphawu Iponti